नेकपा सचिवालय बैठक आज – सुदूरखबर डटकम
काठमाडौं, भदौ २५ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज बस्ने भएको छ। नेकपा कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्ग्याउने गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज अपराह्न ४ बजे बैठक बस्ने जानकारी दिए।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिङ्गापुर उपचारका क्रममा रहेकाबेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा गत भदौ ९ गते बैठक बसेको थियो।
नेकपाको एकताको काम अधिकांश टुङ्गिए पनि प्रवास कमिटी, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, अनुशासन आयोग, महानगरपालिका, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, राष्ट्रिय परिषद् र विभिन्न आयोगमा एकता बाँकी नै रहेका छन्।
दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीसहितको बैठकले गरेका जनवर्गीय सङ्गठन र विभागको इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जमा केही हेरफेर गरेको थियो।
सोही बैठकले पार्टीभित्र अनुशासन खस्कँदै गएको भन्दै कुनै पनि विषय पार्टीभित्र नराखी सार्वजनिक रुपमा प्रचारबाजी गर्नेमाथि कारवाही गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। प्रधानमन्त्री उपचार गरेर फर्केपछि पहिलोपटक सचिवालयको बैठक बस्न लागेको हो। उनी उपचारका लागि सिङ्गापुर गएकाे दिन गत भदौ ५ गते पनि सचिवालय बैठक बसेको थियो।
संविधान दिवसको अवसरमा २६० कैदीलाई राष्ट्रपतिबाट आम माफी
आज संविधान दिवस, देशभर हर्षउल्लासका साथ मनाउदै
आखाँ नै रसाउने उद्धर गर्दै गरेको तस्बिर: १० फिट गहिरो पानीको तलाउबाट बचाए दुई शिशुलाई
घुससहित नापी कार्यलयका कर्मचारी पक्राउ !
देशका ६३ जिल्लामा देखा पर्यो स्क्रब टाइफस ! ३ जनाको निधन, यसरी बच्नुहोस रोगबाट